Mandà ny fangatahan’ny antoko avy any amin’ny farany havanana hanidy ONG mpiaro ny zon’olombelona ny mpampanoa lalàna Bolgariana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2019 14:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Shqip, Español, русский, فارسی, Italiano, srpski, English
Foiben'ny VMRO-BND ao anivon'ny renivohitr'i Bolgaria, Sofia. Sary an'i Filip Stojanovski, CC-BY.
Nandà ny fangatahan'ny VMRO-BND, antoko nasionalista iray avy any amin'ny farany havanana, hanakatonana ny Vaomiera Bolgariana ao Helsinki (BHC), Fikambanana Tsy Miankina (ONG) iray lehibe mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny firenena, i Sotir Tsatsarov, Lehiben'ny Fampanoavana ao Bolgaria.
Ny 30 Septambra, nangataka tamin'ny fomba ofisialy ny mpampanoa lalàna i Angel Dzhambazki, filoha lefitra ao amin'ny VMRO-BND ary mpikambana ao amin'ny Parlemanta Eoropeana, sy i Alexander Sidi, Solombavambahoaka Bolgariana, hanafoana ny BHC noho ny “fitsabatsabahany ny asan'ny fitsaràna” sy ny fanaovana “hetsika manohitra ny lalàmpanorenana, tsy ara-dalàna, tsy mendrika ary manohitra an-karihary an'i Bolgaria,” hoy ny navoakan'ny gazetinà antoko iray.
Tanatinà fanambarana iray nivoaka tamin'ny 8 Oktobra 2019, nilaza i Tsatsarov fa tsy ahitàna hetsika voararan'ny lalàna Bolgariana mihitsy ny sata mifehy ny BHC. Nilaza ny tantara iray avy amin'ny fahitalavitra tsy miankina malaza, Nova Television, hoe:
Mety hangataka fanesorana ny fikambanana tsy miankina amin'ny governemanta [anatin'ny firaketana ofisialy ireo Fikambanana Tsy Miankina] ny lehiben'ny fampanoavana raha toa ka mampiseho porofo hita maso fa misy fifandraisany amin'ny hetsika fampihorohoroana na famatsiam-bola ny hetsika fampihorohoroana izany, hoy ny biraony.
Nilaza ireo tomponandraikitra ao amin'ny VMRO-BND fa hanomboka ireo dingana ara-dalàna hanovàna ny fanapahankevitr'ilay mpampanoa lalàna izy ireo.
Fikambanana mihoatra ny 100 no naneho ny fanohanany ny BHC, isan'izany ny Amnesty International sy ny Human Rights Watch. Ny 7 Oktobra, nilaza tanatinà tafatafa tamin'ny fahitalavitra i Dzhambazki, kandidà tsy nahomby tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna natao ny 27 Oktobra tao Sofia, fa “nitombo ireo fikambanana naneho ny heviny, teo amin'ny zato teo. Mihevitra aho fa nila nakatona ihany koa izy rehetra ireo.”
Raharaha Jock Palfreeman
Nitranga io fangatahan'ny VMRO hanafoana ny BHC io taorian'ny nanomezan'ny Fitsarana Avo famotsorana ambany fepetra an'i Jock Palfreeman, teratany Aostraliana iray 32 taona izay nigadra nandritra ny 20 taona noho ny famonoany mpianatra Bolgariana tanatinà disadisa iray nitranga tao Sofia tamin'ny 2007. Nanolotra fanohanana ara-pitsaràna an'i Palfreeman, izay nigadra nandritra ny 11 taona ary nilaza hatrany fa nanao izany mba hiarovany ny tenany, ny Kaomity Helsinki ao Bolgaria.
Hatramin'ny nisamborana azy, lasa resabe tao Bolgaria io raharaha io. Milaza ny VMRO-BND fa nandrisika ny vokatr'ilay raharaha ny Kaomity Helsinki ao Bolgaria satria nanatrika ireo atrikasa ho an'ny zon'olombelona nokarakarain'ilay ONG ireo mpitsara voakasika. Taorian'ny famotsorana ambany fepetra an'i Palfreeman tamin'ny Septambra, nikarakara andianà hetsipanoherana an-dalambe maro ireo fikambanana nasionalista sasany avy any amin'ny farany havanana ho setrin'izany.
Milaza ny Filohan'ny BHC, Krasimir Kanev, fa miaro ny zon'olombelon'ireo any am-ponja no asan'ilay ONG ary nandika vilana izany ho toy ny fiarovana ireo mpanao heloka bevava amin'ny lalàna ireo mpitarika ny VMRO.
Mandritra izany fotoana izany, raha toa ka nahitàna baiko fandroahana azy tany Aostralia ny famotsorana ambany fepetra an'i Palfreeman, dia voatana any aminà toby fihazonana ireo mpifindra monina ao Sofia kosa izy hatramin'ny namotsorana azy tamin'ny 19 Septambra. Tanatina fanambaràna iray tamin'ny 8 Oktobra, nangataka ireo manampahefana Bolgariana hanazava ny fototry ny fitazonana azy ny Human Rights Watch:
“Nivoaka ny baiko famotsorana an'i Palfreeman avy amin'à Fitsarana Avo tanatinà fanapahankevitra farany izay tsy afaka ampiakarina intsony. Manana ny pasipaorony sy ny tapakila fiaramanidiny izy. Tian'i Aostralia hiverina izy. Fa nahoana no mbola tazonina foana izy?” hoy i Lydia Gall, mpikaroka ambony ho an'i Eoropa Atsinanana sy ny Balkans ao amin'ny Human Rights Watch. “Eo ambanin'ny didin-dalàna, tsy afaka manidy olona na misakana azy ireo ny handeha ianao mba entina hampitàna hevitra fotsiny – tsy maintsy misy fototra ara-dalàna raha tsy izay dia tsy fanarahan-dalàna izany”.
Voalaza fa iray amin'ireo antoko politika manan-karena indrindra ao Bolgaria ny VMRO-BND, tomponà trano maro azo avy amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanjakana tany amin'ny taonjato faha-1990. Tamin'ny 2014, nanatevin-daharana ny firaisan'antoko politika nasionalista maro, antsoina hoe Patriotic Front, izy ary tamin'ny 2017, niditra tao amin'ny governemanta Bolgariana tarihin'i Boyko Borisov, Praiminisitra avy amin'ny afovoany havanana io firaisana io.
11 ora izayEoropa Andrefana